Mashruuca Daryeel ee Kooxda Caafimaadka Wareega (Mobile Health Clinic) – Suomi-Somalia Seura ry
Mashruuca Daryeel ee Kooxda Caafimaadka Wareega (Mobile Health Clinic)
Kirjoittanutsuomisomaliaseura 19/11/2020 22/01/2021 Kategoria(t):Ajankohtaista
Mashruuca Daryeel ee kooxda caafimaadka wareega (Mobile Health Clinic), waxaa degmadda Afmadow laga aasaasay bishii 9aad 2018. Hawlaha mashruucu qabto waxaa ka mid ah bixinta adeegyo caafimaad oo tayo leh sidoo kale wuxuu kabaa adeegyada caafimaadka sida:
Wuxuu adeeg caafimaadka oo tayo leh gaarsiiyaa meelaha durugsan iyo xaafadaha fog ee degmada
Wuxuu u fidiyaa adeeg caafimaad oo tayo leh dumarka, caruurta, curyaamiinta iyo dadka waayeelka ah
Wuxuu tababar iyo qalab siiyaa umulisooyin dhaqameedka
Wuxuu ka kaalmeeyaa bukaanka helida dawo tayo oo lacag la’aan ah
Wuxuu dadka tabarta daran ka kaalmeeyaa gaarida goobaha caafimaadka
Wuxuu dadka u baahan u gudbiyaa shaybaarka, talaalka, nafaqada iyo meelaha ku haboon
Wuxuu bulshada ka wacyigaliyaa cudurada faafa iyadoo lagu soo xirayo adeegyada caafimaadka
Wuxuu shaqaalaha u fidiyaa tababaro iyadoo lala shaqeynayo dowlada, ururada bulshada iyo maamulka
Wuxuu sameeyaa ka hortag la xiriira malaariyada iyadoo la siinayo maro kaneeco dadka ugu baahida badan
Finland-Somalia Association oo bixisa taageerada mashruuca waxay howlahaas kala shaqeysaa Sahal Healthcare and Development Association oo ah urur deeggaan oo gacanta ku haya maamulka iyo hagida labada mashruuc ee ururku ka fuliyo Afmadow. Mashruuca Daryeel, waxaa ka shaqeeya shaqaale u heelan hawshooda lehna xirfado kala duwan, sida labo kalkaaliye caafimaad, labo kalkaaliye kuxigeen, darawalka u wada baabuurka kooxda caafimaadka wareegta. Sidoo kale xafiiska waxaa ka shaqeeya sadex qof oo maamul ah.
Magaalada iyo deeggaanka
Deeggaan ahaan degmada Afmadow waxay ku taalaa Jubada-hoose waxayna u dhaxeysaa magaalooyinka Kismanyo iyo Dhobley. Waa magaalo qadiimi ah oo ka mid ah degmooyinkii ugu horeeyey ee Soomaaliya laga aasaaso. Magaaladu waxay ku taalaa dhul caro san ah oo ku haboon beeraha, xoolaha, ugaadha iyo nolosha bini’aadamka. Xilli roobaadka deyrta iyo gu’ga degmada waxaa ka da’a roobab xoogan, waana degmo hodan ku ah dhinaca xoolaha kala duwan ee Soomaaliya laga dhaqdo. Sida meelo badan oo Soomaaliya ah degmada waxaa saameyn weyn ku yeeshay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay iyo colaadihii, dad badan ayaana ka barakacay degmada. Xilliyadii dambe degmada waxaa ku soo laabanayey dad markii hore degmada ka barakacay iyo dad ka soo laabanaya xeryaha qaxootiga ee Kenya iyo dalkaba. Degmada wax badan ayaa iska badeley sanadaddii dambe dhaqaalaha iyo nolosha dadkuna waxay aheyd mid soo kobcaysa. Bishii sagaalaad ee la soo dhaafay degmada waxaa ka dhacay kulamo taariikhi ah oo degmada loogu doortey gole deeggaan iyo gudoomiye iyo kuxigeen.
Waqti xaadirkan degmada waxaa ka socda horumar iyo yididiilo dadku ay ku doonayaan inay wax qabsadaan oo ay horumar sameeyaan. Finland-Somalia Association waxay degmada ka shaqeyneysay ilaa 2011 xiliggaas oo ay bilowdey iney taageero u fidiso MCH ka degmada oo markii dambe lagu wareejiyey wasaarada Caafimaadka ee Jubaland. Sidoo kale laga soo bilaabo 2014 ururku wuxuu degmada ka hirgalinayey mashruuc khuseeya dib u soo celinta deegaanka kaasoo sanadkii bixiya ama talaala ilaa 10 kun oo geed. Mashruucan wuxuu suurogaliyey in degmada guri walba in la geeyo geed degmadana maanta ay tahay mid ku naalooneysa geedo aad u badan oo mashruucu ama talaalay ama bixiyey (guri, wado, suuq, xafiis iyo iskuulada) intaba.
Su’aalo weydiin uu mashruucu sameeyey 2019 kii waxaa ka soo laabtay in dadka ka faaiideysta mashruucu ay u arkaan mid wax badan ku soo kordhiyey degmada iyo caafimaadkooda. Dadkii ka qeybgalay su’aalo weydiintaa waxaa kale oo ay xuseen in dawooyinka iyo tasiilaadka ay ka helaan mashruuca ee lacag la’aanta ah in ay yihiin kuwo tayo leh. Dhinaca yareynta cudurada faafa mashruuca Daryeel isagoo ka duulaya baahida loo qabo maro kaneecooyinka gaar ahaan dadka danyarta ah, mashruucu wuxuu suurogaliyey qeybinta dhowr boqol oo maro kaneeco, iyadoo ahmiyada la siinayo dadka aan iibsan karin. Sidoo kale mashruucu wuxuu wacyigalin culus ka sameeyaa dhinacyada ka hortaga cudurada faafa, nadaafada iyo muhiimada in dadku ay ku xirnaadaan adeegyada caafimaadka ayna yimaadaan marka ay xannuun isku arkaan. Isla sanadka 2019 guud ahaan dadkii ka faa’iideystay adeegyada mashruuca waxay ku dhowaayeen 5700 qof oo kala ahaa caruur da’adoodu ka yartahay 12 sano, hooyooyin uur leh, kuwo nuujinaya, curyaamiin iyo dad waayeel ah.
Waxyaabaha la taaban karo ee mashruucu uu degmada ku soo kordhiyey waxaa ka mid ah kooxda caafimaadka wareegta (Mobile Health Clinic) oo wadata baabuur iyo dawooyinin tayo leh. Sidoo kale mashruucu wuxuu soo kordhiyey wacyigalin dhinaca caafimaadka, wada shaqeyn iyo adkeynta isku xirnaanta hay’adaha iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka. Mashruucu wuxuu deganyahay xarunta Ramaad (mashruuca deeggaanka, dhireynta iyo ka hortaga xaalufinta) kaas oo ay taageerto Finland-Somalia Association iyo wadanka Finland. Labada mashruuc wada shaqeyn xooggan ayey ka sameeyaan dhinaca wacyigalinta arimaha deeggaanka, yareynta jarida geedaha iyo maareynta qashinka iyo horumarinta caafimaadka.
Dhinaca xaalada korona (covid-19) Afmadow xaalkeedu wuxuu ahaa in mudo ah mid wanaagsan, asbuucyadii la soo dhaafay waxaa soo baxayey in magaalada laga helay bukaano covid-19 kuwaas oo loo fidiyey adeegyo caafimaad qaarna loo qaaday magaalooyinka kale ee dalka si loogu soo dabiibo. Arinka covid-19 mashruucu aad ayuu isaga xilsaaray isagoo shaqaalaha loo sameeyey wacyigalin sidoo kalena la suurogaliyey inay helaan agabka sida af-shareerka, gacmo-gashiga, iyo alkolada gacmaha la mariyo. Sidoo kale mashruucu wuxuu arinkaas wacyigalintiisa si wanaagsan ugala shaqeeyaa maamulka, waaxda caafimaadka iyo ururada. Xaaladana si dhow ayuu mashruucu ula socdaa iyadoo dadka laga wacyigalinayo inay digtoonaadaan isla markaasna in la is dhowro haddii qofku hargab dareemo.
Waxaa loo soo mahadcelinayaa Finland-Somalia Association, maamulka degmada, waaxda caafimaadka, ururada bulshada iyo dhammaan inta gacanta ka geysata hawlaha mashruuca.
Shaqaalaha Mashruuca Daryeel